Sidaas oo ay hadda waxaa laga yaabaa inaad soo baxay tirada qof kasta oo aan taageere u yahay kulan kuwan, sidoo Dhumay! Dhibaatada waa badan 'anti-arintii’ raaxaysan a whinge jir fiican, laakiin waxaa jira siyaabo aad u sii haysan kartaa rabitaanka cuntada ee nolosha iyo gacmo si farxad quudin iyo garabka ka si farxad aamusiin!
Raadi sokeeye aad, soo diro xaaladda a qaylo baxay waca oo dhan arintii la shaqayn jiray, qof kasta oo u ciyaara wax kulan on Facebook ogyahay qiimaha of a saaxiibtinimada labada dhinacba faa'iido weyn. Tani waxaa kaliya aan ku xaddidnayn Rescue Butros aad, wax beeralayda Diirsaday ama crushers nacnac ku faraxsan yahay inuu ku xoqin dhabarka soo yar ee soo laaban doono!
Marka aad is tusay cidda saaxiibada dhabta ah iyaga oo dhan ku daro liiska smart. Markaas waqti kasta oo aad geliso wax Rescue Butros kaliya hubi in ay doortaan liiskan sida aad dhagaystayaasha. Guud ahaan Waxaad dooran kartaa inta u dhexeysa dadweynaha, asxaabta, asxaabta dhow iyo wax kasta oo liiska smart oo aad sameysay. Hel yaqaanaan goobaha gaarka kuu ah, ma sameyn karaan ajaaniib ah oo u raaxayn lahaa goobaha aad hadda kasta oo ka dibna si kasta!
Yaree dhagaystayaasha ay app ku dhejin kartaa adiga ku matalaya, oo aynu dhammaan arkay natiijooyinka app martay duurjoogta ah, dirista codsiyada si loo dhamaystiro saaxiibo random bidix midig iyo xarunta. Taga goobaha ka dibna galay app goobaha dooro 'ii kaliya’ waxaad la yaabi lahaa sida badan waxyaalahan boostada adiga ku matalaya, layaabna ma leh dadka qaar ayaa hela wax yar cranky! run ahaantii ay waxba u baahan tahay in la ogaado everytime aad abuuro firecracker ah ama ay ku aflaxaan saaxiib on leaderboard ka…si daacad ah ayaan kulankaan (badan oo) iyo Chine waxaa xitaa la xakameeyey oo ka war aan cunto.
Isagoo ka hadlayay Chine qaxo waxay bixin karaan in ay dibadda u saaray xaaladda yar haatan kasta oo markaas haddii aad copping a-celin xun yar oo ku saabsan inta aad boostada, wax la yaab leh oo kaliya xasuusiyo dadka in ay ku dhuftey karaa yar 'X’ geeska sare ee midigta ah wax post in ay si buuxda mamnuuco ka war feed. Waxa dadii ku saabsan facebook runtii waa tirada dadka qaba fikrad kama haysan waxay sameynayaan!
Haddii aad ku xayiran yihiin on biriijka in aad u baahan tahay caawimaad ka saaxiibo aad u gudbaan oo aad saaxiibo kaliya ma qaadan yihiin qirashada ugu baahan gargaar (aad u ogaato marka ay la mid saacad dhan iyo aad heystaan ​​kaliya labo ka mid ah saddex baas) aad had iyo jeer ka jari kartaa facebook iyo dhameystirka howlaha gacanta. waxay u shaqaysaa sida iska cad oo keliya marka aad ku jirto qalab sida telefoonka ah.
Ugu dambayntiina aan run ahaantii tip facebook ah, laakiin xusuusnow in aad yeelan karaan 5 ku nool yahay qalab kasta oo aad ciyaarta ku raran ah oo ku saabsan, si ipad, iPhone, laptop, desktop (waalidka / ninkaaga, ama khaaska ahi phone!)
Filed Under: Facebook Tagged: Facebook, asxaabta, Lives